7 Kuhle Day Uhambo Kusukela Naples E-Italy | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Kuhle Day Uhambo Kusukela Naples E-Italy
Naples kuyinto emangalisayo, edolobheni quintessential Italian. Ligcwele amagquma, izakhiwo ezindala, kanye nezinye izimangaliso amancane cute. Kuwumgomo obalulekile ephelele edolobheni Italian kuwo wonke umuntu ofuna ukuzwa eyiqiniso umoya Italian kanye best usuku uhambo ukusuka eNaples.
Nokho, ukuthi akuyona yonke. Kumele iya ku Naples ukuze pizza omangalisayo benza. I-pizza ungeyena kwansuku uhlobo ungathola kuphi emhlabeni. I Napoli pizza kuyinto eliyingqayizivele futhi inama ukunambitheka ezingakwazi ukufaniswa.
Kodwa thina digress. Uma uzithola eNaples, akufanele ukuchitha sonke isikhathi sakho bemangazwe ubuhle edolobheni futhi ukudla pizza wabo ekhazimulayo. Kudingeka nokuba uvakashele indawo. Lokho kungenxa yokuthi Naples inama ezinye indawo iningi amahle e lonke elase-Italy. Kusukela omkhulu amanxiwa yasePompeii ukuba olunothile futhi kuqondakale uma izingane ezidumile Amalfi coast - ungabona eningi.
Unalokho engqondweni, sacabanga siyobe ukukusiza ngokukunika ohlwini ekugcineni eziyisikhombisa engcono usuku uhambo ukusuka eNaples, Italy. Masiqale:
1. Omunye Of The Best Day Uhambo Kusukela Naples: Emanxiweni naseHerculaneum
Besifuna ukuqala hhayi okusobala kodwa kusobala kancane. NaseHerculaneum iyona umzala kancane odumile yasePompeii. I manje abadumile 79 AD kuqhuma iNtaba iVesuvius wabhubhisa kokubili yasePompeii kanye naseHerculaneum engumakhelwane.
Nokho, namuhla, zonke idumisa iya ku yasePompeii. Cishe wonke umuntu emhlabeni umuntu owaziyo ukuthi unjani yasePompeii kuyinto, kodwa bambalwa kakhulu azi mayelana naseHerculaneum. Lokhu kubangela amahloni enkulu uma usicela.
Okokuqala nje, NaseHerculaneum ingaphezu walondoloza. Nawufika lapho, uzothola iningi izindlu nezinye izikhumbuzo cishe yayinjalo.
Okwesibili, NaseHerculaneum kuyaqabukela aminyene. Njengoba sishilo kakade, yila manxiwa kukhona kancane eyaziwa futhi wavakashela ngamanani amancane. Libuye ezincane futhi kulula ukubona ngokuningiliziwe.
Nomlayezo Wokufundisa Ngokuvakasha naseHerculaneum Kulula kakhulu, njengoba izitimela iya ku-ke ukusuka eNaples njalo ngehora noma ngakho. Anazi ngisho kungadingeki nokuba ukhathazeke ngokusho isikhathi njengoba uyoba nenala ngakho ukubona yila manxiwa.
Yize naseHerculaneum sihle nakakhulu, ngokubona kwethu, awukwazi miss yasePompeii. Awu, okungcono usuku uhambo ukusuka eNaples njalo ukufaka kokubili yasePompeii naseHerculaneum.
Lonke idolobha Naples uhlala emthunzini iVesuvius anamandla. Nokho, YasePompeii kuphela ongasho ngobuqotho ukuthi uyazi namandla mlilo iVesuvius. Ungabona entabeni lapho Pompei, futhi ungakwazi ukuqonda ngempela amandla intabamlilo kuphela esebenzayo e-Europe.
Uma uya yasePompeii, udinga ukuba balungele. Le ndawo omkhulu ezingaphezu kuka abantu abaningi bacabanga, ngakho kuye kwadingeka nihambe kuleyo ndawo emuva unga. On top of ukuthi, uma uya ehlobo, kushisa kakhulu, ngakho uzodinga ukuletha amanzi amaningi.
Nokho, ngifike yasePompeii ingxenye elula. Ungakwazi ngokushesha ukufinyelela ke ukusuka eNaples nge isitimela, okuyinto uya khona usuku lonke.
3. Omunye Of The Best Day Uhambo Kusukela Naples: iNtaba iVesuvius
Ngokwemvelo, ayengekho eNaples kungaba ephelele ngaphandle kokubona iVesuvius. Ngokoqobo engakwazi ukuya ngaphandle kokuthi bayibone ngenxa yobukhulu balo omkhulu okuyinto kungabonakala cishe nomaphi Naples.
Nokho, ungakwazi engcono esehlele hhayi esekude, kodwa ngu emi kuso. Le ntaba mude kakhulu, kodwa usengakwazi ukuthatha uhambo ehlelekile futhi sihambe kuze ihora noma ngaphansi. Uyokuthola inselele, kodwa isipiliyoni uzothola phezulu kuwufanele ngokuphelele.
Ukuze sifinyelele iNtaba iVesuvius, okudingayo sithathe isitimela okusheshayo ukusuka eNaples ukuthi kuthatha nawe eduze phansi kuya esiteshini Ercolano Scavi. Khona-ke udinga ukuthatha elinye Vesuvio Express amabhasi ukuthi ofinyelela eqophelweni ukuqala we ngokulinganisela ukushaywa eziyinselele.
Pescara eNaples Izitimela
yonke Amalfi Coast licela nje angabonwa. Uma uya khona, ngokushesha sabona ukuthi kungani. I amawa omkhulu kukhona liyesabisa, futhi ubuhle ulwandle engachazeki.
Kumele sithathe isitimela ukugibela yokwehlisa Sorrento noma Salerno. Khona-ke ungakwazi ukuthatha ibhasi noma ukuqasha imoto ukuya phezu imigwaqo ezincane ukuthi anqamule Amalfi coast.
Positano ilungile phakathi ogwini futhi kakhulu idolobha elihle phezu kwakho. Uma kwenzeka ebona noma iyiphi izithombe amadolobha phezu Amalfi Coast, uke kakhulu cishe babeyibonile Positano. Udumo ezungeze idolobha sisuke sifaneleka, njengoba indawo kuyinto obumangalisayo.
Amandla Izitimela Naples
Salerno eNaples Izitimela
Taranto eNaples Izitimela
5. Omunye Of The Best Day Uhambo Kusukela Naples: Sorrento
Sorento Iyidolobhana elincane ohlala okuphambene ohlangothini Amalfi coast. Ngakho eduze Naples, futhi ungakwazi kalula ukufinyelela ke nge isitimela sendawo imigqa.
Idolobhana inama ambalwa amabhishi abatelekile kanye idolobha omangalisayo ubudala. Abantu abaningi iya ku Sorrento, hhayi zolwandle amawa esesabekayo, kodwa ngomlando. Sorrento ngempela edolobheni quintessential ubudala Italy. Kuyinto mancane kakhulu kunalawo Naples futhi unalo lelo umoya Italian emadolobheni kweqiniso ubudala elincane kuphela Italian yaseningizimu ungaba.
On top of ukuthi, kumele nakanjani vakashela Sorrento omunye okusemandleni akho usuku uhambo ukusuka eNaples ngenxa Capri. Kwesiqhingi Capri eliseduze futhi iyona omunye eziqhingini eziningi ezinhle ezincane siyoke.
Foggia eNaples Izitimela
Tivoli eNaples Izitimela
Temoli eNaples Izitimela
Lecce eNaples Izitimela
6. Isiqhingi Of Ischia
Eziningana langa iziqhingi ozungezayo Naples. Nokho, kude omunye kakhulu elihle Ischia, futhi lapha Yingakho:
Ischia yisona siqhingi esikhulu kunazo e eChwebeni laseNaples
Ischia has konke: amabhishi, amanzi ezishisayo, zokudla, futhi wakha izakhiwo ezinkulu ezibabazekayo
Kuyinto enhle kakhulu ukuzijabulisa Naples. Ungase futhi uthole ngokushesha ngokuthatha isikebhe kusukela maphakathi Naples.
Abanaso ushayele le omkhulu 1200 Igumbi esigodlweni Italian Versailles ize. lesi sigodlo ligcwele izitebhisi omkhulukazi futhi kuyinto UNESCO World Heritage Site. Uzothola okubizayo amafulethi zasebukhosini iqoqo presepi - Christmas cribs laseNaples.
Sekukonke, awukwazi yonakale ngokuvakashela lesi sigodlo esikhulu. Ungathatha isitimela esuka esiteshini central eNaples niphume esiteshini Caserta. Lesi sigodlo kuphela ukuphila kube uhambo olufushane kamuva.
Naples ukuze Caserta Izitimela
Salerno ukuze Caserta Izitimela
Amandla Caserta Izitimela
Bari ukuze Caserta Izitimela
Ngakho, lapho une kubo, wabayisikhombisa, sahlala naye engcono usuku uhambo ukusuka eNaples. Uma ufuna ukuzwa ngempela ubuhle Naples, udinga ukuya kuzo zonke lezi uhambo. Futhi, uma ufuna ukufunda kabanzi, ukhululeke ukuthintana Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “7 Kuhle Day Uhambo Kusukela Naples E-Italy” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-naples/?lang=zu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Daytrips europetravel ukulele Naples ENaples Tranride amathiphu isitimela travelitaly traveltips